युएईबाट अनिश तामाङको नबिनालाई च्यालेन्ज : सक्छौं जेल हालेर देखाउ ?
आफ्नो जातियता, धर्म संस्कृतिको विपक्षमा उभिएको भनेर विरोध गर्दा साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्ने
२६ भदौ युएई । नविना लामा तिमी साँच्चैको बहादुर चेली रहेछौं । सबै भन्दा पहिलो मुद्दा मेरो नाममा लगाउ.. मैले किन विरोध गरे नविना लामाको? आफ्नो जातियता, धर्म संस्कृतिको विपक्षमा उभिएको भनेर विरोध गर्दा साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्ने धम्कि दिने नविना लामा ! सक्छौ मुद्दा हालेर देखाउ। जातिय उत्पिडन मुक्तिको लागि फासी चढ्न तयार छु सक्छौ जेल हालेर देखाउ ? यो दुबईबाट अनिस तामाङ्गले सामाजिक संजालमार्फत नविना लामालाई दिएको चुनौती हो ।उनले आफुलाई जेल हाल्ने चुनौती दिंदै आफ्ना भनाइ राखेका छन् उनको भनाइ जस्ताको तस्तै निम्न छन्